Kulamada Gudiga Iskuulka | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Iyadoo loo daneynayo wada xiriirka furan, Degmadu waxay rabtaa inay fursad siiso dadweynaha si ay ula hadlaan Guddiga Dugsiga. Haddii aad rabto inaad faallo ka bixiso mowduuc kasta inta lagu jiro Kal-fadhiga Daraasadda ee 19-ka Abriil, fadlan qorshee inaad ka qayb gasho kulanka shaqsi ahaan. Maaskarada ayaa loo baahan doonaa waxaana la arki doonaa fogaanta bulshada. Waxaad awood u yeelan doontaa inaad aqriso faallooyinkaaga inta lagu gudajiro Qeybta Soo Galinta Muwaadinka ee Casharka Daraasadda. Kulanku wuxuu bilaabmi doonaa 6:00 pm, waxaana loo qorsheeyay Citizen Input 7:00 pm pm Awoodda dhagaystayaasha ayaa la geyn doonaa 15. Fadlan xusuusnow inaad aqriso Tilmaamaha loogu talagalay Faallooyinka Bulshada (shirarka Gudiga Dugsiga) iyo Muwaadiniinta Galinta (Daraasadda Kalfadhiyada). Ma jiri doonto fursad lagu bixiyo fikradaha bulshada / fikradaha muwaaddinka shirarka gaarka ah ama fadhiyada xiran.
Si si fiican loogu wargeliyo dadweynaha, Guddiga Dugsiga waxay ku bixin doonaan ajandaha iyo dukumintiyada taageeraya websaydhka Guddiga Dugsiga ugu yaraan saddex maalmood ka hor kulan kasta oo Guddiga ah ama Kalfadhiga Daraasada.
Kalfadhiga daraasada 19 Abriil
ajandaha iyo qalabka taageeraya
Ku saabsan Shirarka Guddiga Dugsiga
Kulamada Soo Socda
Dhammaan shirarka Guddiga Dugsiga way u furan yihiin dadweynaha, haddii aan lagu cayimin inuu yahay kulan xiran ama fulineed sida waafaqsan sharciga Minnesota. Kulamada waxaa lagu qabtaa Qolka Beesha ee Xarunta Adeegga Degmada, 5621 County Road 101, Minnetonka, MN 55345.
Kulamada caadiga ah ee Guddiga Iskuulku waxay dhacaan 7da fiidnimo Khamiista ugu horeysa ee bil kasta haddii aan si kale loo cayimin.
Kalfadhiyada Daraasadu waxay dhacayaan 6-da maqribnimo Khamiista saddexaad ee bil kasta, marka laga reebo Oktoobar oo kulanka la qaban doono Khamiista afaraad si looga fogaado isku dhac. Kuwani waa kalfadhiyo shaqo, dadweynuhuna waa lagu soo dhaweynayaa laguna casuumay inay ka soo qayb galaan.
Kulamada Gudiga Iskuulka hada si toos ah ayaa loo daawanayaa. Waxaa sidoo kale lagu duubay oo lagu keydiyey degelkan maalin kadib kulanka. Daqiiqadaha kulanka Golaha Waxbarashada ee Guddiga Dugsiga waxaa lagu ansixiyay kulanka xiga ee Guddiga Iskuulka waxaana lagu dhajiyay websaydhka kulankaas kadib.
Fadlan ogow, waxaan haysan doonaa turjubaano luqadda dhegoolaha ah iyo / ama ciwaan xiran oo loogu talagalay Kulamada Guddiga Dugsiga ee caadiga ah Haddii aad si shakhsi ah uga qaybgeleyso Kulanka Daraasadda oo aad jeceshahay inaad codsato turjubaan luqadda dhagoolaha ah, fadlan la xiriir Carrie Voeltz cinwaanka carrie.voeltz@minnetonkaschools.org
Abriil 19, 2021: Kulankii Daraasada
Meey 6, 2021: Kulan Joogto ah
Meey 20, 2021: Kulankii Daraasada
Juun 3, 2021: Kulan Joogto ah
Juun 17, 2021: Kulankii Daraasada
Ogast 5, 2021: Kulan Joogto ah
Ogast 19, 2021: Kulankii Daraasada
Sebtember 2, 2021: Kulan Joogto ah
Sebtember 23, 2021: Kulankii Daraasada
Oktoobar 7, 2021: Kulan Joogto ah
Oktoobar 28, 2021: Kulankii Daraasada
Nofeembar 4, 2021: Kulan Joogto ah
Nofeembar 18, 2021: Kulankii Daraasada
Diisambar 2, 2021: Kulan Joogto ah
Diseembar 16, 2021: Kulankii Daraasada
Arkiifiyada waxaa ka mid ah ajandayaasha kulanka, daqiiqado (markii la ansixiyay kulanka soo socda) iyo fiidiyoowga dhamaan kulamada caadiga ah. Kulamada daqiiqadaha ee sanad dugsiyeedka 2015-2016 iyo wixii ka weyn, fadlan halkan guji .
Abriil 19, 2021: Kalfadhigii Daraasada Gudiga Dugsiga
Abriil 8, 2021: Kulan Joogto ah
Maarso 18, 2021: Kulankii Daraasada
Maarso 4, 2021: Kulan Joogto ah
Febraayo 18, 2021: Kal-fadhiga Xiran & Casharka Daraasadda
Febraayo 4, 2021: Kulan Joogto ah
Janaayo 21, 2021: Kulankii Daraasada
Janaayo 7, 2021: Kulan Joogto ah
Diisambar 17, 2020: Fadhiga Daraasada
Diisambar 3, 2020: Kulan Joogto ah
Nofeembar 19, 2020: Kulankii Daraasadda
Nofeembar 5, 2020: Kulan Joogto ah
Oktoobar 22, 2020: Fadhiga Daraasada
Oktoobar 1, 2020: Kulan Joogto ah
Sebtember 24, 2020: Kulan Gaar ah
Sebtember 17, 2020: Fadhiga Daraasada
Sebtember 3, 2020: Kulan Joogto ah
Ogast 20, 2020: Fadhiga Daraasada
Ogosto 9, 2020 - Gudiga Dugsiga oo Xiran Fadhiga
Ogast 6, 2020: Kulan Joogto ah
Kulano Badan Xamuul
duubista kulanada iyo WADAJIDKA
Waxaad ku eegi kartaa shirarka Guddiga Dugsiga ee la duubay adoo adeegsanaya Diiwaanka Kulannada ee boggan (oo ku taxan taariikhda kulanka Guddiga).
Kulamada Guddiga Dugsiga sidoo kale waxaa lagu sii dejiyaa adeeg bixiyaha fiilada. Fadlan halkan guji si aad u aragto jadwalka baahinta.
Golaha Dugsiga 101